Muxuu ahaa qalliinkii lagu sameeyey Pele kaddib markii lagu soo booday isagoo ku sugan Waddanka Faransiiska? – Gool FM
(Sao Paulo) 15 Abriil 2019. Xiddigii waynaa ee reer Brazil, Pele ayaa haatan xaaladdiisa caafimaad ay soo hagaagaysaa kaddib markii lagu sameeyay qalliin dhanka Kellida ah oo lagaga saaray dhagax, sida ay dhaqaatiirtu sheegeen.
Pele oo 78-sano jir ah ayaa 2-dii bishan April waxaa la dhigay Isbitaal ku yaalla Faransiiska, kaddib markii uu xanuunsaday xilli uu daawanayay xiddiga Kooxda Paris Saint Germain iyo xulka Faransiiska ee Kylian Mbappé.
Waxaa kaddib Pele loo ogolaaday in Isniintii la soo dhaafay uu ku laabto dalkiisa hooyo ee Brazil, iyadoo kaddibna si dhaqso ah loogu gudbiyay Isbitaalka Albert Einstein ee Magaallada Sao Paulo.
Laacibkii hore ee xulka qaranka Brazil, Pele ayaa 3 jeer ku guuleystay Koobka Adduunka sanadihii 1958, 1962 iyo 1970, waxaana uu xirfaddiisa ciyaareed dhaliyey wax ka badan kun gool.
Dhaqaatiirtu waxay caddeeyeen in Pele lagu sameeyay qalliin lagaga saaray dhagax xagga Kellida ah, haatanna xaaladdiisa caafimaad ay soo hagaagayso.
Shaxda rasmiga ah kulanka Premier League ee kooxaha Watford Vs Arsenal